mercredi, 08 mai 2019 21:51
Mahabo: "Novonoina ny zanako roalahy, izao fofoina koa ny aiko", hoy Razafimahefa
Mandry andriran'antsy, miafina sy miovaova toerana atoriana isan'andro i Razafimahefa.
Maty novonoina ankitsirano ny zanany roalahy tamin'ny taona 2016. Nametraka fitoriana ry Razafimahefa hanenjehana ireo izay nahavanona izao loza izao.
Voarohirohy amin'io vono olona io ny solombavambahoakan'i Mahabo teo aloha sy ny zanany lahy ary lehilahy iray hafa, izay samy tazomina am-ponja vonjimaika ao Morondava hatramin'ny 25 aprily 2019 teo.
mercredi, 08 mai 2019 21:37
Ambodivona près station Total en ce moment
mercredi, 08 mai 2019 21:27
Andranomanelatra: Nesorina ilay Sefo Fokontany rehefa tsy nanatrika fizarana "vary mora"
Tao amin'ny biraon'ny Fokontany ny toromarika voaray teny ifotony fa hivarotana ny vary mora anjaran'Andranomanelatra ny alarobia 17 aprily 2019. Nisy namindra teny amin'ny biraon'ny delege indray izany, ary nosaromana politika ka nametrahana banderaolin'ny Elgeco Plus, izay kandida lohalisitry ny vovonana IRD "Isika rehetra miaraka @ Andry Rajoelina" amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny tompony.
Rehefa izay dia tsy nanatrika io fizarana vary io ilay Sefo Fokontany. Nampangaina ihany koa fa manohana kandida hafa fa tsy ny arotsaky ny IRD.
Nilatsaka ny 6 mey 2019 ny didy manala azy amin'ny toerana ary dia tanterahina amin'ny alatsinainy 13 mey ho avy izao ny famindram-pahefana amin'ny solony izay efa voatendry.
mercredi, 08 mai 2019 16:49
Fantatrao ve: Ady lehibe faharoa
I Staline no nametraka ny datin'ny 8 mey ho datin'ny filavoana lefona alemanina
Tsy nilamina ny famaranana ny ady lehibe voalohany nisy teo amin'ny eropeanina tandrefana sy tatsinana ny taona 1914-1918, izay ady nisy teo amin'ny Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Japon, États-Unis sy ireo firenena zanatany.
Teo ihany koa ny finiavana anitatra fanjakana teo amin'ny firenena telo antsoina hoe "Axe", dia i Allemagne nazie, Italie fasciste ary ny Empire du Japon.
Nisy koa anefa ireo fifandonana tetsy sy teroa, toa ny tao Ethiopie nifandona tamin'ny Italianina ny taona 1935, ny tao Espagne niady an-trano ny taona 1936, ny Sinoa nifandona tamin'ny Japon ny taona 1937, ny tao Europe izay nogiazan'ny Alemanina i Autriche ny taona 1938, ary mbola nitariny tany Tchécoslovaquie, izay nakany mihitsy an'i Pologne ny taona 1939.
mercredi, 08 mai 2019 16:30
Feno sy Bodo: Nifandray ny tadi-donkanga tamin'ireo mponina nifampiresaka taminy
Vao maraina dia nitety isan-trano teto amin'ny Boriborintany faha III i RALAMBOMANANA Fenoherintsoa, na i Feno, sy RAZAFINDRAZAKA Bodoharisoa Faliherinantenaina na i Bodo mpihira, kandida ho solombavambahoaka eto amin'ny Boriborintany faha III, mitondra ny laharana 01 amin'ny lisitra natolotry ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM).
Nizara, nanazava ireo vina entin'izy ireo rehefa lany Solombavambahoaka. Nihaino ihany koa ireo hetahetan'ny mponiny, ireo sosokevitra, ary ireo fanakihanana.
Anisan'ny maro tamin'izany ny fandriampahalemana, ny tsy fanana asa, ny resaka sosialy, ny fanadiovana ny tanàna, ny jiro, ny lalan-kely, ny tsena, ny resaka fitohanan'ny fiarakodia, ny olana eo amin'ny jiro sy rano, ny fidangan'ny vidim-piainana.
mercredi, 08 mai 2019 15:27
Toamasina: Nisy nanafika ny « Accès Banque » Bazary kely
Androany alarobia 8 mey tamin’ny 11ora atoandro teo no nitrangan’ny fanafihana. Enin-dahy tsy nisaron-tava nitondra moto telo no nanafika. Nitondra basy vita gasy roa izy ireo. Ny telo niditra ny banky, ny telo hafa kosa tety ivelany niandry moto.
Tsy volaza ny sandan'ny vola lasa na tamin’ny banky na tamin’ireo mpanjifa tao anatiny. Nitsoaka ireto andian-jiolahy vao nahare ny anjombona tao anatin'ny banky.
Raha nanaraka azy ireo ny polisy dia nanjanon'ireo jiolahy teo akaikin'ny CEG Ratsimilaho ny moto iray fa maty an-dalana avy eo tsy nety velona.
Ahiana ho misy ifandraisany amin'ireo enin-dahy tsy mbola tratra tamin'ilay fanafiha ny « grossiste » iray tao Tanambao V izy ireo. 5 tamin’ireo andian-jiolahy 11 nanafika io mpamongady io mantsy no tratra fa ny 6 mbola miriaria any.
mercredi, 08 mai 2019 15:21
Ambositra: Kandida depiote notendrena ho talem-paritry ny fambolena sy fiompiana ary jono
Nanaitra ny maro, indrindra ireo mpifaninana amin’ny fifidianana solombavambahoaka ato amin’ny Distrikan’Ambositra, ny nandrenesana ny tatitry ny filankevitry ny minisitra tamin’ny 24 aprily 2019 fa notendrena ho Talem-paritra misahana an’Amoron’i Mania araky ny tolo-kevitry ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono i Andriamanampy Nomenjanahary.
Ity farany anefa dia kandida mpisolo toerana amin’ny fifidianana solombavambahoaka hotanterahina amin’ny 27 mey 2019, narotsaky ny « Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina ».
Ny eo aza teren’ny lalàna hametra-pialana, nefa ity vao maika notendrena indray ? hoy ny fanamarihan’ny maro eto Ambositra sa finiavana hitanila amin’ny fifidianana ny ao ambadik’ity fanendrena ity.
mercredi, 08 mai 2019 15:10
Mpiasan’ny ORTM voaroaka: Tsy mahefa mitsara ny Filankevi-panjakana
Nilaza ho tsy mahefa mitsara ny fitoriana nataon’ireo mpiasa folo mahery voaroaka tao amin’ny ORTM (TVM, RNM, DIT) taorian’ny TAGNAMARO teny Mahitsy-Ambohidratrimo tamin’ny 30 martsa 2019 ny Filankevi-panjakana tamin’ny didy navoakany androany.
Tsy afa-po ka milaza hitondra ny raharaha any amin’ny Fitsarana hafa ireo mpiasa, izay mahatsiaro niharan’ny fandroahana tsy ara-drariny.
mercredi, 08 mai 2019 09:50
8 mai: Croix Rouge
Journée Mondiale de La Croix Rouge.